१० वर्षीय बालक खसेर बेपत्ता भएको कपनको ढल किन रह्यो ह्वांगै? :: युनिक श्रेष्ठ :: Setopati
टेन्डर आह्वान गर्नै बाँकी, अझै दुई महिना बन्ने छाँट छैन
कपनमा धेरै समयदेखि ह्वांग ढल जहाँ मंगलबार राति खसेको बालक अहिलेसम्म बेपत्ता छ। तस्बिर: युनिक श्रेष्ठ/सेतोपाटी
मंगलबार राति एक १० वर्षीय बालक खसेर बेपत्ता भएको कपनको ढलमा वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराईले छेकबार त लगाइदिए, तर यो ढल कम्तिमा अझै दुई महिना बन्ने छाँट छैन।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-१२, कपनको उक्त ढल धेरै दिनदेखि ह्वांगै थियो। मंगलबारको झमझम झरीबीच राति सवा ८ बजे यसमा खसेको बालक अहिलेसम्म फेला परेको छैन। यस्तो दुर्घटना नदोहोरियोस् भनेर वडाध्यक्ष भट्टराईले बुधबार दिउँसो ढलको चारैतिर फलामका पाइप जोडेर अस्थायी छेकबार लगाइदिएका हुन्। तर यो ठाउँ अझै खतरामुक्त छैन।
बीचसडकमा रहेको ढलमा मान्छे खस्नसक्ने जोखिम हुँदाहुँदै निर्माणकार्य किन अधकल्चो छाडियो त? हामीले यही प्रश्न बिहीबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुख यादव सिग्देललाई सोध्यौं।
बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा यहाँको सडक ढलान भइरहेको र पर्याप्त बजेट उपलब्ध नभएकाले काम अधकल्चो रहेको उनले बताए।
यो बाटोमा कुनै समय खहरे खोला बग्थ्यो। बढ्दो सहरीकरणले नदीखोला मिच्दै जाने क्रममा खहरे खोलामाथि ग्राभेल बाटो बन्यो र बाटोमुनि खोलाको पानी पठाउन ह्युम पाइप राखियो, सिग्देलले भने, 'पानीको बहाव ह्युम पाइपले थेगेन। ठूलो वर्षा हुँदा सडक जलाम्य हुनुका साथै वरिपरिका घरभित्र पनि पानी पस्न थाल्यो। यो समस्या समाधान गर्न हामीले त्यसै हिसाबले सडक डिजाइन गरेर ढलान गर्न थालेका थियौं। ह्युम पाइप पनि निकाल्ने योजना थियो।'
यसका लागि प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष थोरै थोरै बजेट दिने हुँदा काम पूरा गर्न धेरै समय लागेको उनले बताए।
उनका अनुसार कार्यालयले पछिल्लो दुई वर्षमा यहाँ लगभग १५० मिटर सडक ढलान गरेको छ। गत वर्ष ७० लाख रूपैयाँ बजेटमा ६५ मिटर ढलान गरेको थियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष ७२ लाखमा ८९ मिटर ढलान गरियो।
'यो बहुवर्षीय योजनामा पर्दैन। हरेक वर्ष आउने रकम सकिएपछि नयाँ बजेटअनुसार काम गर्न फेरि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'गत वर्षको बजेटबाट ६५ मिटर ढलान गरेपछि पैसा सकियो, काम पनि रोकियो।'
अब अन्दाजी ४४ मिटर सडक ढलान गर्न यसपालि ७० लाखको बजेट आएको छ। यसले ह्वांग ढलमाथिको सडक ढलान पूरा हुने र त्यसपछिको काम काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्ने उनले बताए।
कार्यालयले बजेट विनियोजन र डिजाइनको काम पूरा गरे पनि यो ४४ मिटर ढलान कहिले सुरू हुन्छ, त्यो चाहिँ टुंगो छैन। अहिलेसम्म यसको टेन्डर आह्वान गरिएको छैन। संसदबाट समयमा बजेट पारित नहुनुले टेन्डर आह्वान गर्न ढिलाइ भएको उनी बताउँछन्।
सम्भवत: अर्को साता वा दसैंपछि मात्र टेन्डर आह्वान गरिने र त्यसपछि बल्ल ढलान सुरू हुने उनको भनाइ छ।
नियमअनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा ३५ दिने सूचना जारी गरिन्छ। इच्छुक ठेकेदार कम्पनीहरूले त्यो समयभित्र आवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि कार्यालयले उपयुक्त ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्छ। यस आधारमा अर्को साता सूचना निकालियो भने ठेकेदार कम्पनी छनौट गरेर काम सुरू गर्न अझै कम्तिमा दुई महिना लाग्नेछ। दसैंपछि टेन्डर गरियो भने त त्योभन्दा बढी समय लाग्छ।
ढल ह्वांगै रहनुको अर्को कारण पनि उनले सुनाए।
'कच्ची सडक र ढलान गरिएको सडकको उचाइ तलमाथि पर्नुले पनि यो ढल ह्वांगै रहेको हो,' उनले भने, 'यसरी ह्वांगै रहँदा जोखिमपूर्ण हुने देखेर हामीले वरिपरि बाँसको छेकबार राखेका थियौं तर बाढीले त्यो पनि बगाइदिएछ। यसले साह्रै दुखद घटना भयो। मैले हिजो बेलुकी थाहा पाएँ।'
सरोकारवाला निकायले जस्तोसुकै कारण देखाए पनि निर्माणाधीन सडकमा लापरबाहीपूर्वक ढल ह्वांगै राख्दा बच्चा खसेर बेपत्ता हुने अवस्था आएको हो। त्यसैले मंगलबारको घटनामा स्थानीयहरू सिँचाइ डिभिजन कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीलाई नै जवाफदेही ठान्छन्।
यस्तो अवस्थामा डिभिजन कार्यालय वा ठेकेदार कम्पनीले पीडित पक्षलाई कस्तो क्षतिपूर्ति बेहोर्छ त भनेर पनि हामीले सोध्यौं।
जवाफमा सिग्देलले भने, 'काम भइरहेको बेला दुर्घटना भएको भए बिमाको सुविधा हुन्थ्यो तर ठेकेदारसँगको करार सकिसकेको बेला दुर्घटना भयो। त्यसैले बिमाको सुविधा कार्यालयमा छैन। तत्काल पीडित पक्षलाई के गर्न सकिन्छ भनेर यसै भन्न सकिन्न।'
यसबीच महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध र प्रहरीको विपद व्यवस्थापन टोलीद्वारा हराएका बालकको खोजी जारी छ। वृत्त र विपदबाट २५-२५ जनाको टोली खटिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।
उक्त टोलीले विष्णुमती, बागमती र कपन क्षेत्रका सम्भावित ढलका पाइपहरूमा खोजी गरिरहेको छ। बच्चा फेला नपरेकाले ऊ को हो भनेर यकिनसाथ भन्न सकिएको छैन।
कपनको प्रहरी कार्यालयमा दुईवटा बच्चा हराएको उजुरी परेको छ। एउटा बच्चा मंगलबार बिहानैदेखि हराएको र अर्को बेलुकी हराएको भन्ने उजुरी छ। बेलुकी हराएको भनिएको बालक नै ढलमा खसेर बेपत्ता भएको हुनसक्छ तर नभेटिएसम्म पहिचान ठ्याक्कै भन्न नसकिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
उजुरी परेकामध्ये एउटा बालक गएराति हजुरबुवासँग फुपूको घरबाट निस्किएको थियो। फुपूको घर कपनको खरिबोटमा छ। हजुरबुवा र हजुरआमा साततले भन्ने ठाउँमा बस्छन्। त्यो बालक सानैदेखि आफ्ना हजुरबुवा-हजुरआमा र फुपूसँग हुर्किएको हो। गएराति हजुरबुवा र नाति खरिबोटबाट साततले फर्कंदै थिए। पानी धेरै परेको हुँदा उनीहरू बीचबाटोमै ओत लागेर बसे। त्यति बेला हजुरबुवाले रक्सीसमेत खाएको खुलेको छ।
ओत लाग्ने क्रममा नाति कति बेला छुट्यो भन्ने हजुरबुवाले पत्तो नै पाएनन्। केही समयमा पानी रोकिएपछि बल्ल उनलाई नाति आफूसँग नभएको थाहा भयो। एक्लै घर गयो कि भन्ठानेर उनी सरासर घरै गए। त्यहाँ पनि नातिलाई नदेखेपछि फुपूकै घरमै फर्कियो कि भन्ठाने। तर बुधबार बिहान फुपूलाई सोध्दा ऊ त्यहाँ पनि थिएन।
प्रहरीले ढलमा खसेको बालक उही हो कि भनेर उसको तस्बिर प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई देखाएका पनि थिए। तर रातको समय र झमझम पानी परिरहेकाले बालकको अनुहार कसैले याद गर्न भ्याएनन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ७, २०७८, ११:३८:००